Why is Zimbabwe not considered a democratic country? - tenquestion.com
Why is Zimbabwe not considered a democratic country?
Home/ Geography/Why is Zimbabwe not considered a democratic country?
Geography	William 2 years 1 Answer 910 views Silver	0
democracy is based on consultation and discussion explain , explain any three features of democracy , is zimbabwe a communist country , is zimbabwe a democracy or dictatorship , is zimbabwe a democratic country , what is democracy answer , what is the significance of rule of law and respect for rights in a democratic country , why estonia is not a democratic country
Zimbabwe is not considered a democratic country because it has a mono-part system where elections are always won by ZANU. The Zimbabwe African National Union was a militant organisation that fought against the white minority government in Rhodesia, formed as a split from the Zimbabwe African People’s Union (ZAPU). ZANU won the 1980 elections under the leadership of Robert Mugabe, and seven years later merged with Joshua Nkomo’s ZAPU to form ZANU-PF.